मेरालागि सोसल मिडियाको उपयोग सामाजिक अभियानको प्रचारप्रसार गर्नु र सुचना दिनु नै हो-ङवाङ योन्तेन ग्याछो - MeroReport
मेरालागि सोसल मिडियाको उपयोग सामाजिक अभियानको प्रचारप्रसार गर्नु र सुचना दिनु नै हो-ङवाङ योन्तेन ग्याछो
सोसल मिडिया मार्फत नेपालमा भइरहने बिभिन्न सामाजिक अभियानहरुमा निकै रुची देखाउने ङवाङ योन्तेन ग्याछो नेपाल बाहिर बस्छन् तर उनको सक्रियता यहाँ हुनेहरुको भन्दा बढी नै हुनेगर्छ । दुइसाता अघि काठमाण्डौ उपत्यकामा भएका दुइवटा सामाजिक अभियानहरु गाउँमा किताव अभियानको दोश्रो चरणका दुइ विद्यालयहरुलाइ पुस्तक हस्तान्तरण र टिएफसी नेपालको नवौँ मिसनताका उनी काठमाण्डौमा भेटिए । अभियानको हतारोका कारण उनीसंग त्यतिखेर लामो कुराकानी गर्न नमिलेकोमा पछुतो पनि लागिरहेको थियो तर स्काइप तथा फेसबुकमा भेट भइरहने हुँदा अनलाइनमै भएपनि कुरा गर्न मिल्ने आशा त छदैँथियो । सोही अनुरुप ङवाङ योन्तेनसंग हामीले अनलाइनमा कुराकानी गरेर यो साताको साताका ब्लगर स्तम्भ पोष्ट गरेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रकाश लामिछानेले गरेको कुराकानी :
आफ्नो बारेमा अलिकति बताइदिनुस न ।
म खोटाङ जिल्लाको एक विकट गाँउको किसान परिवारमा जन्मिएको मान्छे, जहाँबाट दिक्तेल सदरमुकाम पुग्न पुरै एकदिन लाग्छ । कामपरेर सदमुकाममा जानुपर्दा खाजा सामल बोकेर जानुपर्ने र जिल्लामा रहेका कार्यालयका कर्मचारीहरुले भनेको समयमा काम पनि नगरिदिने । यस्तै समस्याहरुका कारण जिन्दगीलाई सहज बनाउनको लागि संघर्ष गर्दै अवसर खोज्ने क्रममा बेलायत आईपुगेको छु । बेलायतमा बसोबास गर्न थालेको लगभग ७ बर्ष भयो ।
ङ्वाङ छोपेललाइ अरुले कसरी चिन्ने? कतैकतै तपाँइ ङवाङ योन्तेन ग्याछो नामबाट समेत भेटिनुहुन्छ, यस बारेमा अलिकति बताइदिनुस न?
मेरो वास्तविक नाम ङवाङ योन्तेन ग्याछो शेर्पा नै हो । पहिले मेरो ब्लगकोलागि ङवाङछोपेल डटकम् नामक एउटा डोमेन नाम दर्ता गरेको थिए त्यहाँबाट नै ङवाङ छोपेल भनेर चिनिएँ । साथीहरुले ङवाङ योन्तेन ग्याछो भनेर बोलाएकै मन पर्छ ।
सोसल मिडियामा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । तपाइको यहि सक्रियताका कारण धेरैले चिन्छन पनि । के-केमा हुनुहुन्छ?
सोसल मिडियामा २०११ बाट अलिक सक्रिय भएर लेख्न थालें । सक्रिय रुपमा लागिपर्ने प्रभाव भने टुईटर प्रयोगकर्ताहरु अनिल घिमिरे @aakarpost, हरी न्यौपाने @kakabaa जस्ता अरु थुप्रै साथीहरुको सक्रियता देखेरै नै परेको हो । पछी आएर गाँउमा किताव अभियान अन्तर्गत विनय गुरागाई @binayaji, बाबाजी, बिष्णु खत्री लगायत सोसल मिडियाका अरु थुप्रै साथीहरुसंग मिलेर सहयोग जुटाउने काममा लागिपरियो साथै टिएफसी नेपालको मिसनहरुमा आवद्द भएर काम गर्ने मौका मिल्यो । यिनै गाँउमा किताव अभियान र टिएफसी नेपालका मिसनको कारण केही साथीहरुले मलाई चिन्छन जस्तो लाग्छ ।
ब्लग पनि लेख्नुहुन्छ है ! ब्लग लेखन चाँही कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो?
हजुर लेख्छु । तर काम साथै अन्य व्यस्तताको काराण सोचेजस्तो समय दिएर लेख्न सकेको अवस्था छैन । ब्लग लेख्न भने २०११ बाट शुरु गरेको हुँ । मेरो ब्लग http://www.ngawang.com/ हो ।
समाजिक गतिविधी र समाजमा योगदान पुऱ्याउने सहयोगी हातहरुलाई आधार बनाई ब्लग लेख्ने गर्छु ।
तपाइको ब्लगमा संस्कृति, समाजसेवा लगायतका बारेमा लेखिएको पाएँ मैले सर्सर्ती हेर्दा । खासमा तपाईको ब्लगको बिशेषता चाँही के हो?
मेरो ब्लगको तेस्तो उदाहरणीय बिशेषता त खासै केही छैन । सांस्कृतिक भन्दा पनी समाजिक सेवा र विकासलाई माध्यम बनाई लेख्ने कोशीस गर्दैछु ।
अनि तपाइको ब्यक्तिगत रुचीको कुरा चाँही के नि?
अन्य साथीहरुको जस्तै रमाईलो गर्ने, घुम्ने, किताव पढ्ने र खेलहरु खेल्ने हुन तर अहिले थोरै परिवर्तन आएको छ । फुर्सद हुँदा नेपालमा आर्थिक समस्यामा परेका विभिन्न समुदायका साथीहरुको लागी सहयोग जुटाउन पाएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
तपाइ लण्डनमा बसेर गरिरहनुभएको आफ्नो पेशाको कुरा र डायस्पोरामा बस्ने नेपालीहरुका अरु अनुभव अनुभुति तथा समस्या र सवालहरुलाइ ब्लगमार्फत उठाउन कत्तिको चाहनुहुन्छ?
आफ्नो पेशाको बारेमा भन्दा पनि अरु अनुभव, समस्या र सवालहरुलाई भने समय मिलाएर उठाउने बिचारमा छु ।
तपाईले देखे-भोगे अनुसार नेपाल बाहिर बसेर ब्लगिङ गरिरहेका तपाइजस्ता युवाहरुले आफुले कस्ता बिषयबस्तु उठाउन चाहन्छन र नेपालमा बसेर ब्लगिङ गरिरहेकाहरुले कस्ता बिषय उठाइदिउन भन्ने चाहन्छन?
अरु युवाहरुले कस्ता बिषयबस्तुमाथि ब्लग लेख्न चाहन्छन त्यो त थाहा भएन तर बिदेशमा बस्ने साथीहरुले आफु बसेको ठाँउको राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक बिषयहरु माथि आफुले देखेको, जानेको, भोगेको र अनुभव गरेको कुराहरु छर्लङ्ग उतारेर लेख्न सके नेपालमा बसेका साथीहरुलाई केही सिक्ने अवसर हुनेथियो । जसले समाज र देश परिवर्तनको लागि टेवा पुग्नसक्छ । नेपालका ब्लगरहरुले बिभिन्न बिषयबस्तुको बारेमा लेख्ने गरेका छन् । जसप्रति हामी सबैजना सन्तुष्ट हुनुपर्छ । छोटो समयमा नेपालमा राम्रा ब्लगरहरु निस्केका छन् ।
हामीले ब्लगिङ मार्फत देशभित्रका धेरै सामग्रीहरु पढ्न या हेर्न त पाइरहेका हुन्छौँ तर डायस्पोराका कन्टेन्टहरु धेरै पढ्न पाँइदैनन । किन होला बाहिर बस्ने ब्लगहरुले आफ्ना अनुभुतिहरु बाँडे यहाँकालाइ त्यो धेरै काम लाग्ने थियो नि हैन र?
बिदेशमा बस्ने ब्लगरहरु बिदेशका अनुभवहरुलाई समेटेर ब्लग लेख्नुको सट्टा नेपालमै हुने गरेका घटनाक्रम र बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायबिच हुने ईभेन्टहरुको बारेमा लेख्ने गर्छन । त्यस समुह भित्र म पनि पर्छु । हामीले नेपाली समुदाय भन्दा बाहिरका कुराहरुलाई पनि समेटेर लेख्नसके सबैका लागि काम लाग्नेथिए । नेपालको बारेमा लेख्नको लागि त नेपालमै उत्कृष्ट ब्लगरहरु छँदैछन नि ! यो मलाइ पनि लागिरहेको कुरा हो ।
ब्लगमा आफ्ना कुरा लेख्नुका अलावा अरु सोसल नेटवर्किङ साइटमा हुने कस्ता कुराहरुले तपाइलाइ तान्नेगर्छ? खासगरी ट्विटर फेसबुकमा हुने बहसका बारेमा भन्दा ।
फेसबुक भन्दा पनी टुईटर निकै प्रभावकारी देखेको छु । प्राय: हुने राजनैतिक बहस नै हो, त्यो भन्दा अरु विभिन्न बिषय माथी साथीहरुले लेख्ने सकारात्मक बिचार, समाजिक कार्य र खेलकूदको बारेमा गरिने अपडेटहरु नै हुन मेरो लागी सोसल नेटवर्किंगको आकर्षण ।
सोसल नेटवर्किङ साइटहरुसंग जोडिन चाहने एक युवाका नाताले भन्नुपर्दा तपाइले नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ?
ब्लग भनेको आफ्नो अनुभवहरुलाई सेयर गर्ने एउटा माध्यम हो । जहाँ बिभिन्न पेशामा लागेका साथीहरुले आफुले जाने, बुझेका कुराहरु लेख्ने देखी लिएर राजनैतिक, सामाजिक चुनौती र समाधानहरु राख्न सक्छन । मान मर्यादा र साईबर आचारसंहिता भित्र रहेर सकारात्मक ढंगले ब्लगिङ् गर्ने हो भने नेपाली ब्लगको भविष्य राम्रो देखेकोछु । साथै यसले नेपाली समाजमा राम्रो परिवर्तन ल्याउने छ ।
तपाईसँग आफ्नो ब्लगसंग जोडिएको वा सोसल नेटवर्किङ साइटमा कुराकानी गर्दाको त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झन लायक अनुभव छ?
गाँउमा किताव अभियानको प्रचार प्रचार सोसल नेटवर्किङ साइट र ब्लगकै माध्यम द्वारा गरें र गर्दै आएको छु । त्यही क्रममा धेरै भन्दा धेरै साथीहरु संग घुलमिल हुने मौका पाएँ । सहयोग जुटाउने कोशीस गर्दा धेरै मित्रहरु पाएको छु ।
सोसल मिडियाले तपाइ हामीजस्ता युवालाइ के दिएको छ?
मनोबल । सोसल मिडियाकै कारण हामी युवाहरु आज आफ्नो मनमा लागेका कुराहरु खुलेर लेख्न र बोल्न सक्ने भएका छौँ । त्यसका अतिरिक्त नयाँ मित्रहरुको संख्या बढाउने त छँदैछ ।
अनि हामीहरुले चाँही सोसल मिडिया मार्फत अरुलाइ के दिएका छौँ जस्तोलाग्छ तपाइलाइ?
गाँउ गाँउमा किताब पुऱ्याउनु र काठमाडौ भित्र छरिएर रहेका बिभिन्न फ़ाउन्डेशनहरुलाई सहयोग गर्नु भनेको सुन्दा साधारण लागे पनि यो पक्कै सानो काम होईन । यिनै कामहरु हामी सबै मिलेर गाँउमा किताव अभियान र टिएफसी नेपाल अन्तर्गत सोसल मिडियाकै माध्यमद्वारा गर्दै आएका छौँ ।
सोसल मिडियामार्फत भइरहेका बिभिन्न सामाजिक अभियानहरुमा तपाँइ अरुभन्दा धेरै खट्नुहुन्छ । तपाइ बिदेशमा बसेर पनि यस्ता मिसनका लागि कसरी खटिइरहनुभएको छ?
फुर्सदको समयमा बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सबैसंग भेटेर कुरा राख्ने गरेको छु । मन हुनेहरुले सहयोग गरेका छन भने कतिले त्यत्तिकै टारेका पनि छन । मेरो लागी कोशीस गर्नु नै सबै भन्दा ठुलो कुरा हो । कतिले त फोन र ईमेलको भरमा पनी सहयोग गरेका छन् । सक्ने सहयोग म आफैले पनि गर्नेगर्छु । यसमा सोसल मिडिया र ब्लगले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ । मेरालागि सोसल मिडिया यी सामाजिक अभियानको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नु या सुचना दिनु नै हो । सोसल मिडियामा प्रचार प्रसार बिना यस्ता अभियानलाई सफल पार्न सम्भव छैन । साथै सोसल मिडिया मार्फत हुने यस्ता अभियान सफल हुँदा आत्मसन्तुष्टी मिल्छ । आत्मसन्तुष्टी एक हिसावले मनोरञ्जन पनि हो ।
भर्खरै नेपाल आएर विभिन्न सामाजिक अभियानमा सरिक भएर पुन: बेलायत फर्किनुभएको छ, नेपाली युवाले सोसल मिडिया मार्फत गरिरहेको अभियान कस्तो रहेको पाउनुभयो?
प्रसंसनिय छ । साथीहरु कुनै न कुनै क्षेत्रमा लागिपरेका छन, काम गरिरहेका छन । त्यसका बावजूत पनि अभियानलाई सफल पार्न कुनै कसर छाडेका छैनन । साथीहरुले गाँउमा किताव अभियान होस् या टिएफसी नेपालको मिसन, आफुले सक्ने भौतिक, नैतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आईरहेका छन । साथीहरुले अभियानको लागी आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । यसले निरन्तरता पाओस् यही छ कामना ।
फेरी ब्लगतिरै फर्किउँ, तपाइको सबैभन्दा धेरै हेरिएको ब्लगपोष्ट कुन हो?
इमान्दारिताको साथ भन्नुपर्दा मैले खासै यसको लेखाजोखा राखेकै छैन । अपडेट कमै गर्ने भएकोले मेरो ब्लग त्यति धेरै पाठकहरुको बिच पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ ।
तपाइ आफुचाँही अरुको ब्लग कत्तिको हेर्नुहुन्छ? केही ब्लगको नाम लिनुपर्दा?
मैले प्राय: पढ्ने भनेको aakarpost.com, lexlimbu.com, jawknock.com लगयातका अन्य धेरै ब्लगरहरु छन ।
यति कुरा गरिसकेपछि तपाइको विचारमा सोसल मिडिया के हो?
सोसल मिडियाबाट सुचना र समाचार पनि आदनप्रदान भईरहेकै हुन्छ, सबैले आ-आफ्नो मनमा लागेको कुराहरु पनि लेखिरहेकै देखिन्छ र आफ्नो बारेमा अथवा आफ्ना प्रोडक्टको बारेमा प्रचार प्रसार पनि गर्छन । यी सबै कुरा सोसल मिडियामा गरिने भएपछि यो अवस्यपनि मिडिया नै हो । तेसैले, मेरो लागि सोसल मिडिया कुनै एउटा सिमीत थलो भन्दापनि असिमित कार्यका निम्ति बनाइएको थलो हो ।
अनि यसको खास महत्व चाँहि?
व्यावसायीहरुले आफ्नो प्रोडक्ट साथै ब्राण्डको सजिलैसँग बिज्ञापन गर्न सक्नु, प्रयोगकर्ताहरुले आफुले चाहे बमोजिम एक अर्कासंग बिभिन्न कन्टेन्टहरु आदान प्रदान गर्न सक्नु र समस्यामा परेकाहरुका लागि सहयोग जुटाउन सक्नु नै सोसल मिडियाको महत्व हो । पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न देशहरुमा राजनैतिक आतंकको बिरोध गर्न र समर्थन जुटाउनको लागि यसले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ ।
ब्लगमा बिभिन्न बिषय र क्षेत्रको बारेमा लेख्न सकिने भएकोले गर्दा यो आफैमा एक पत्रकारिताको अँश जस्तै देखिन्छ पनि।
ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
१००% जरुरी छ । ब्लगमा होस् या माइक्रो ब्लगमा हामीले देख्ने र पढ्ने गरेका छौँ । कतिपय साथीहरुले ठाडो भाषामा अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गर्ने, कसैको व्याक्तिगत जीवनमा सिधै नराम्रा प्रभाव पर्ने कुराहरु लेख्ने, यस्ता खालका अभ्यासहरु बन्द गरिनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत ब्लग हो, आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यही लेख्न सकिन्छ भन्नेगरेको पनि कहीँ कतै, कसैको मुखबाट सुन्ने गरेको छु । आफ्नो हो भन्दैमा मनपरि र अरु कसैको मानहानी हुने कुरा त लेख्नु भएन नी !
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ?
बिदेशमा बसोबास गर्नुहुने सबै मित्रहरुले महिनामा एकदिन मात्र कफी, विस्की, बियर या वाईन नपिएर त्यसमा खर्च हुने पैसा सामाजिक अभियानहरु जस्तो गाउँमा किताव अभियान नै भनौँ न, यस्ता अभियानका लागी जम्मा गरिदिनु भए नेपालमा रहेका विभिन्न पिछाडिएका, बिकट क्षेत्रका बालबच्चाहरुले पढ्नको लागी किताव पाउने थिए । सबै मिलेर कामगरे हाम्रो सानो भन्दा सानो सहयोगले धेरै वटा जिल्लाहरुमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सकिने थियो । सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध: सम्भव भए सबैले सामाजिक कामका लागि आजैबाट थोरै भएपनि महिनाको अन्त्यमा केही पैसा छुट्याउने अभ्यास सुरु गरौँ । अन्त्यमा आफ्नो बिचार साथीहरु सामु पुर्‍याउने मौका दिएकोमा मेरोरिपोर्टलाई हृदयदेखी नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
Comment by Ajaya Dhungana on April 4, 2013 at 6:55pm
धेरै धेरै बधाई छ गुरु :))
Comment by Pagal Basti on April 4, 2013 at 6:15pm
ङवाङ योन्तेन ग्याछो ज्युलाई बधाइ
Comment by Binaya Shekhar on April 4, 2013 at 10:53am
तपाईका बिचारहरु पढ्दा खुशी लाग्यो मित्र । सोसल मिडिया मार्फत भएको भेटघाट मार्फत तपाईसँग सामाजिक अभियानमा पनि हातेमालो गर्न पाउँनु गौरवको बिषय हो । सोसल मिडिया एउटा हाइवे हो, हाइवेमा सबै आफ्नै तालले दौडिन्छन्, दौडिने क्रममा कसैले फोहोर पार्छन्, कसैले अरुले पारेको फोहोरलाई एकछिन रोकिएरै भएपनि सफा गर्छन् । कोही अभियन्ता छन् केही अभियान शुरु गर्छन् र निरन्तर भएपछि टाढिन्छन् तर बिभिन्न अभियानमा तपाईको निरन्तरता प्रशंसायोग्य छ । बिदेशमा बसेर पनि देशका लागि केही गर्ने तपाईको जाँगर कहिल्यै नमरोस् । मेरो रिपोर्टमार्फत तपाईका कुराहरु समुदायको जानकारीमा पुर्याउन पाउँदा हामीलाई पनि खुशी लागेको छ ।
Comment by Amuna Chapagain on April 3, 2013 at 3:53pm
Comment by pawan neupane on April 3, 2013 at 11:46am
सबै मित्रहरुले महिनामा एकदिन मात्र कफी, विस्की, बियर या वाईन नपिएर त्यसमा खर्च हुने पैसा सामाजिक अभियानहरु जस्तो गाउँमा किताव अभियान नै भनौँ न, यस्ता अभियानका लागी जम्मा गरिदिनु भए नेपालमा रहेका विभिन्न पिछाडिएका, बिकट क्षेत्रका बालबच्चाहरुले पढ्नको लागी किताव पाउने थिए । Great Thought,Great Practice ....Congratultion Ngawang Ji :):)
Comment by Prakash Lamichhane on April 3, 2013 at 11:38am
congratulations Ngawang ji :)
Comment by Aakar Anil on April 3, 2013 at 11:35am
Congratulations dai. :)